Mavara machena paganda anogona kunge asina kukuvadza kana kuti ane ngozi. – Noor Health Life
Mavara machena paganda anogona kunge asina kukuvadza kana kuti ane ngozi.
Pamatanho akasiyana ehupenyu, ganda redu, kunyanya ganda rechiso, rinochinja kwakawanda, somugumisiro wekuti dzimwe nguva zvipikiri, mapundu anokonzera kusagadzikana, dzimwe nguva mavara, ayo dzimwe nguva anopora ari ega kana mushure mekurapwa.Zvisinei, mhando mbiri idzi zvemakwapa paganda zvinoda kunyatsotariswa. Yokutanga ndiyo makwapa matema anoonekwa muchimiro cheshavishavi pane chero chikamu chechiso nekuda kwekutsva, kucheka, chero chirwere kana nhumbu, kupererwa neropa kwakanyanya kana mhedzisiro yemishonga, kana vakaonekwa nenguva.Kana iyo yekupedzisira yakatwasuka mabikirwo haisi kushandiswa uye mirairo yechiremba inoteverwa, ipapo mavara aya anonyangarika kana kupera.
Zvisinei, kana chivara chichena chikaonekwa pane chero chikamu chemuviri chakadai sechiso, mutsipa, mapepa, chifuva, musana kana zvidya, ndicho chikonzero chekunetseka, chisingafaniri kuregererwa. Aya mavara machena akakamurwa kuita mhando ina. Rudzi rwekutanga rune madiki machena, machena machena shades, asingakuvadzi uye anorapika. Izvo zvinokonzerwa nefungus duku, iyo inokonzera kukanganisa pamusoro peganda. Kumusoro kwemavara aya kwakazvimba zvishoma uye kazhinji kunonyangarika nekukwenya kudiki. Aya mavara anonyanya kutaurwa muzhizha uye anopera muchando. Dzimwe nguva vanoonekwa nekudikitira zvakanyanya, asi vanozoreruka zvishoma mushure mekugeza. Kune avo vane ruvara rwakasvibira, mavara machena aya anoonekwa paganda kubva kure, asi kune avo vane ruvara rwakanaka, vanoita kunge vane pink.
Nenzira, aya mavara haakonzeri kuputika, asi mune dzimwe nguva itching inonziwo. Kana munhu mumwe chete mumba akava nyajambwa wemavara machena aya, vamwe vanhu vanogonawo kukanganiswa. Nokudaro, zviri nani kuti murwere atevere matanho ekudzivirira pamwe chete nekurapa. Semuyenzaniso, isa parutivi zvinhu zvaunoshandisa zvakaita sematauro, hengechepfu, hembe nezvimwe.
Rudzi rwechipiri runosanganisira denderedzwa, mavara machena anoonekwa pazviso zvevakomana nevasikana vane rough surface. Dzimwe nguva unonzwa sekunge ganda raoma uye rave chena, havatsvedze. Kusanzwisiswa kwakawanda pamusoro pemavara machena aya ndeekuti anokonzerwa nekushaikwa kwecalcium, asi pane zvimwe zvakawanda zvinokonzeresa makwapa aya, chinonyanya kukosha kurwara kwevana, kunyangwe vakapiswa nezuva. zvakare kukanganiswa nemakwapa aya. Uyezve, mune dzimwe nguva honye dzomudumbu dzinovakonzera. Aya mavara anoonekwawo pahuma, dama, chirebvu uye dzimwe nguva pamutsipa, asi haaparadzirike uye anopera ega pasina kurapwa.
Rudzi rwechitatu runosanganisira maperembudzi, chinova chirwere chinotapukira chinokonzerwa nebhakitiriya rinonzi M. leprosy. Chirwere chinowanzobata ganda uye tsinga. Ine nhanho ina. Padanho rekutanga panoonekwa denderedzwa jena pamuviri wemurwere, kunyanya pamatama, mawoko, zvidya nemagaro. Ichi chiratidzo chakakosha chechirwere, sezvo chirwere ichi chiri padanho rekutanga panguva ino, zvino kana kuongororwa kwakarurama uye kurapwa kunopiwa pakarepo, ipapo chirwere chinogona kudzorwa. Kana ikanonoka, chirwere chinogona kupararira nokukurumidza uye chisingarapiki.
Rudzi rwechina runosanganisira mavanga. Chirwere ichi hachipararire. Pakutanga, chivara chichena chinooneka pane chero chikamu chemuviri uye kana paine bvudzi pakati pemavara aya, rinoshandukawo chena. Kana mavara aya ari pamusoro pemusoro, bvudzi rebvudzi rinoshanduka richena.
Mune zvimwe zviitiko, mavara anoramba akafanana kwemakore, uye mune vamwe vanhu anopararira nokukurumidza zvokuti muviri wose unovharwa nemavara machena. Varwere vane manyoka havagoni kushivirira kusimba kwezuva, mukuwedzera ivo havana kusagadzikana uye zvachose vanogara vaine hutano.
Kunewo mamwe mavara machena atinokoka. Aya mavara anowanzo kukonzerwa nekunaka kwechiso, senge nhamba huru yevakadzi nevasikana, kana vakadzokorora kushandisa bleach cream kuchena ganda, semhedzisiro ganda ravo rechisikigo rinokanganiswa.
Uyezve, kana pane allergies, kuputika uye kutsva mavara zvinogona kuitika.Saizvozvo, kushandiswa kwemakemikari henna kunogona kukonzera kukanganisa paganda. Zvisinei, angave mavara madema kana machena, haafaniri kuregererwa uye panzvimbo yekuzvirapa, pakarepo taura nedermatologist uye uwane kurapwa kwakakwana.Sei mavara machena aya achionekwa pamuviri?
Iwe wakamboona vanhu vane mavara machena anooneka paganda ravo, asi nei izvi zvichiitika uye zvinogoneka sei kuzvidzivirira?
Chirwere ichi kana hurwere hunonetsa zvikuru kuvanhu, izvo zvakare zvakakosha.
Nyanzvi Vanachiremba, Mapurofesa, Vanachiremba, Vanachipangamazano paNoor Health Life Institute. Zvinoenderana nenyanzvi dzese idzi, Noor Hutano Hupenyu hunogona kukupa zvese zvakanakisa. Uye Noor Health Life inokukurudzira zvakare kuti utsigire varombo uye kubatsira avo vari muzvipatara.Noor Health Life inobatsira varwere vanoshaya.Kamwezve, ndinokukurudzirai kuti mutsigire Noor Health Life uye mubatsire vanotambura neNoor Health Life. Ndinokutendai mose. Kana iwe ukaverenga chero chinyorwa cheNoor Hutano Hupenyu wobva waverenga nekungwarira. Verenga.
Zvinowanzotendwa kuti chirwere ichi, chinonzi bursa, chiito chekunwa mukaka mushure mekudya hove, asi sayenzi yezvokurapa inoramba izvi.
Kutaura zvazviri, zvinoitika apo masero anopa ganda ruvara rwaro rwomuzvarirwo anorega kugadzira mamwe mavara.
6 Zvirwere zvinoonekwa paganda
Maererano neNoor Health Life, chirwere ichi chinowanzoonekwa nenzira yemavanga maduku kana mavara machena.
Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi manomwe pasi rose vakabatwa nechirwere ichi, icho chinonziwo autoimmune disease, nekuti chikaonekwa, masoja emuviri anorwisa macells anoshanda kuti ruvara ruve zvakareruka.
Kana iyo yakabatwa pakutanga, ndiko kuti, kana mavara asingaonekwi paganda, asi ruvara rune chiedza, saka ganda rinowanzodzorerwa kune chimiro chayo chepakutanga.
Kushandiswa kweAC zvinokonzeresa zvirwere zveganda: tsvagiridzo
Nenzira, mukurapa kwechirwere ichi, chinangwa icho nyanzvi dzine pamberi pavo ndechekudzorera ruvara nokukurumidza uye kuchengetedza kushanda kwayo.
Nechinangwa ichi mamwe steroid creams anoshandiswa kudzora kuzvimba nepo Oion Mint inogona zvakare kubatsira.
Mune zvimwe zviitiko kurapa kunorerutsa ruvara rweganda risina kukanganiswa kuita kuti mavara machena aonekwe.
Zvakare kurapwa kwakareruka uye kuvhiyiwa ndizvo zvingasarudzwa. Kuti uwane mimwe mibvunzo nemhinduro unogona kuwana Noor Hutano Hupenyu kubva email uye taura nesu paWhatsApp. noormedlife@gmail.com